Himalaya Dainik » किन लगाउने साउनमा हरियो ?
किन लगाउने साउनमा हरियो ?
धार्मिक सांस्कृतिका अनुसार साउन महिना शुरु भएसँगै युवती र महिलाहरु हरियो तथा पहेँलो चुरा र सारीमा सजिएका देखिन्छन् । आज भोलि हरियो सारी, चुरा पोते, पहेलो सारी चुरा पोते फेसन जस्तै बनेको छ ।
फेसनको रुपमा चलेपनि यसको धार्मिक र वास्तुशास्त्रीय विशेषता र महत्व पनि मानिएको छ । साउन महिनामा विशेषगरि भगवान शिवको पूजा अर्चना हुन्छ र भक्तालुहरुले शिव भगवानलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्छन् ।
भगवानलाई खुसी पार्न किन हरियो नै लागनुपर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिन सक्छ । यसका केही कारणहरु पाइन्छन् । साउन महिना प्राकृतिक रुपमा हरियालीको महिना पनि हो । चारैतिर हरियाली देखिन्छ जसका कारण भगवानका भक्तहरुले पनि आफूलाई त्यही रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।